के हो कोशी व्यारेज ? जसले वर्षेनी रुवाउँछ नेपालीलाई - hamro Desh
के हो कोशी व्यारेज ? जसले वर्षेनी रुवाउँछ नेपालीलाई
कोशी नदीमा निर्माण गरिएको व्यारेज नेपालका लागि अभिषाप सावित भएको छ । तराई क्षेत्रमा वर्षातका बेला डुबान हुनुको प्रमुख कारण कोशी व्यारेज हो । व्यारेजका ढोका नेपालले खोल्न नपाउँदा लाखौँ जनताको घरघरमा बाढी पस्ने गरेको छ ।
नेपाली भूमिमै बाँध निर्माण गरिएको भएपनि कोशी व्यारेजको सञ्चालन, रेखदेख लगायतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भारतको हातमा छ । कोशी ब्यारेजमा ५६ वटा ढोका छन् ।
बाढीले नेपाली क्षेत्र जलमग्न हुँदा पनि भारतले मुश्किलले ३० वटा मात्रै ढोका खोल्न गरेको छ ।‘बर्खामा ब्यारेजका सबै ढोका खोल्ने हो भने सिंगो बिहार डुब्छ । सोही कारणले भारतले सबै ढोका खोल्दैन । ढोका नखोल्दा नेपाल डुब्ने गरेको छ ।
ढोका खोल्ने वा नखोल्ने सबै अधिकार भारतको हातमा छ । नेपाली पक्षको अविवेकी सम्झौताको कारणले हरेक वर्ष नेपालले कोशीको विपत्ति सहनुपरेको हो ।
सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको बीचमा ११ सय ७५ मिटर लामो ब्यारेज निर्माण गरिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई सोही ब्यारेजले जोडेको छ । नेपालले ब्यारेजका कारण बनेको बाटोबाहेक अरू सुविधा लिन पाएको छैन । ब्यारेजमा पानी लैजानको लागि नेपालतर्फ एक सय २५ किलोमिटर तटबन्ध समेत निर्माण गरिएको छ ।
३० मिटर अग्लो ब्यारेज बनाएको भएपनि अहिले चाहिँ बालुवाले पुर्दा उक्त ब्यारेजको गहिराइ मुश्किलले १५ मिटर रहेको जानकारहरू बताउँछन् । कोशी ब्यारेजको पानी नेपाल र भारत दुवै पक्षले प्रयोग गर्ने कोशी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वी नहरको पानी भारतले र पश्चिमी नहरको पानी नेपालले प्रयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर हिँउदको बेलामा सबै पानी भारतले प्रयोग गर्दै आएको छ । पूर्वी नहर होचो र पश्चिमी नहर अग्लो बनाइएको कारणले हिँउदको सम्पूर्ण पानी भारतले प्रयोग गर्छ ।
भारतले कोशीकै पानीको कारणले २ लाख ६१ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्दै आएको छ । नेपालले २५ हजार हेक्टर भूमि पनि सिँचाइ गर्न पाएको छैन । बर्खायाममा त भारतले बिहार डुब्ने डरले सबै ढोका लगाउँछ । तर हिउँदमा भने सबै पानी बिहार लैजान्छ ।
सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको नेपाली सिमानामा कोशी ब्यारेज निर्माण गरिएको छ । सन् १९५४ मा भएको कोशी सम्झौता अनुसार कोशी नदीमाथि ब्यारेज निर्माण गरिएको हो ।
-karnali khabar bat
कञ्चनपुर बाट आयो अर्को डरलाग्दो खबर
केटीले मन पराएको थाहा पाउन जान्नुस यी संकेत
आफुसँगै आगोमा जलेर बितेकी आमालाई पाँच बर्षका बालकले मिडियाबाटै बोलाए
पहिलो डिभोर्ष एनिभर्सरीमा प्रेमीसँग मिलेर केक काट्ने मिना ढकालको यस्तो छ योजना
ओलीले गरे बालिकामाथि बलात्कार
कञ्चनपुरमा अर्काे दुःखद घटनाः चाउमिन खादा दुई बालकको ज्यान गयाे
मलेसियाको टप ग्लोब कम्पनीमा नआउन नेपालीहरुको आग्रह
लक्ष्मीलाई खुसी पार्ने ७ काइदाहरू…जानी राख्नुस
अनमोल र उपासनाको ‘रहर छ सँगै’ ट्रेन्डिङको पहिलो नम्बरमा